Shirkadda Duulista Hawada ee Ruushka ayaa soo diraysa 33 Sukhoi Superjet 100 diyaarad rakaab ah sanadka 2021-ka
Bogga ugu weyn » Wararka Duulista » Shirkadda Duulista Hawada ee Ruushka ayaa soo diraysa 33 Sukhoi Superjet 100 diyaarad rakaab ah sanadka 2021-ka
In ka badan 30 diyaaradood oo kuwa rakaabka qaada ah oo Sukhoi Superjet ah ayaa ku biiraya diyaaradaha Russia 100.
Qiyaastii 200 oo diyaaradood oo ah SSJ100 ayaa durbaba duulaya
Qorshayaasha 2021 waxaa ka mid ah in illaa 33 diyaaradood oo kuwa Superjet ah la geeyo diyaaradaha Ruushka
Qeybo badan oo ka mid ah alaabooyinka la keenayo ayaa aadaya diyaaradda Aurora
Raiisel wasaare ku xigeenka Ruushka Yuri Borisov wuxuu ku dhawaaqay in Ruushka Shirkadda Diyaaradaha ee United (UAC) waxay qorsheyneysaa inay soo gudbiso in ka badan 30 SSJ100 (Sukhoi Superjet 100) diyaarad rakaab ah dhamaadka 2021.
Ku dhowaad 200 oo diyaaradood oo noocaan ah ayaa durbaba duulaya, qorshayaasha sanadkaan waxaa ka mid ah in 33 diyaaradood oo kuwa Superjet ah la keeno diyaaradahayaga, ”ayuu yiri ra’iisul wasaare ku xigeenka.
Sarkaalka ayaa intaa ku daray in qeyb badan oo ka mid ah alaabooyinka la geeyo ay tagi doonaan Aurora, oo ah diyaarad laga leeyahay Ruushka oo laga leeyahay Bariga Fog oo xarunteedu tahay Yuzhno-Sakhalinsk, Gobolka Sakhalin.
Sukhoi Superjet 100 ama SSJ100 waa diyaarad goboleed ay naqshadeysay shirkadda diyaaradaha Ruushka ee Sukhoi Civil Aircraft, qeyb ka mid ah Shirkadda Diyaaradaha Mareykanka (hadda: Diyaarad Gobol - Laanta Shirkadda Irkut).
Horumarkeedu wuxuu bilaabmay 2000, waxay duullimaadkeedii ugu horreeyay ku qaadatay 19kii Meey 2008 iyo duulimaadkeedii ugu horreeyay ee ganacsi 21-kii Abriil 2011 oo ay la qaadatay Armavia.
Diyaaradda MTOW oo ah 46–49 tan (101,000 - 108,000 lb) sida caadiga ah waxay fadhisaa 87 ilaa 98 rakaab ah waxaana ku shaqeeya laba 77-79 kN (17,000-18,000 lbf) PowerJet SaM146 turbofans oo ay soo saareen iskaashi u dhexeeya Faransiiska Safran iyo Ruushka NPO Saturn.
Markay ahayd Maajo 2018, 127 ayaa shaqeynayay illaa Sebtembar raqyadu waxay galeen duulimaadyo 300,000 iyo 460,000 saacadood. Diyaaradda ayaa duubtay seddex shil oo khasaaro haleelay ah iyo 86 dhimasho ah laga soo bilaabo Maajo 2019.